Barber Chop Apk Khuphela For Android [Umdlalo] -Luso Gamer
Ke ngoko unecaliber kwaye ulungele ukugqwesa izakhono zokuyila ekuchebeni iinwele ezingafunekiyo. Emva koko unokukhuphela ngcono kwaye ufake inguqulelo yamva nje yeBarber Chop Apk. Umdlalo wokudlala usimahla wokukhuphela kwaye awufuni umrhumo weprimiyamu ukufikeleleka.
Phaya ngaphandle intaphane yezinye izicelo zobuhle ziyafikeleleka. Nangona kunjalo, uninzi lwala maqonga afikelelekayo kwi-intanethi yipremiyamu kwaye inokucela ubhaliso. Ngaphandle kokuthenga umrhumo, akunakwenzeka ukufikelela kwezo.
Kodwa namhlanje apha sizise simahla kwi-intanethi Umdlalo we-3D, eyenza ukuba abadlali babonise izakhono zokudlala. Ekuphela kwento abayifunayo kukufaka umdlalo kwaye babonise izakhono zabo zokucheba iinwele. Ukuba uyawuthanda umdlalo ke khuphela iBarBer Chop Game apha.
Yintoni iBarber Chop Apk
IBarber Chop Apk ngumdlalo we-intanethi kunye nomdlalo ongekho intanethi owakhiwe nguLajeune & Associates, LLC. Injongo yokuqulunqa umdlalo kukubonelela ngeqonga elikhuselekileyo. Apho abadlali banokugqwesa ngokulula izakhono zabo zokusika ngokususa iinwele ezinesitayile.
Abadlali be-Android sele bengqina imidlalo emininzi kwi-intanethi. Ezi zilungile ekudlaleni kwaye ziyahambelana nazo zonke izixhobo zedijithali. Nangona kunjalo ukufikelela kwideshibhodi ephambili kufuna umrhumo weprimiyamu. Ngaphandle kwelayisensi yepro yokuthenga akunakwenzeka ukufikelela kuloo midlalo.
Imidlalo yobuhle ekwi-Intanethi ibandakanya iMakeup, Ukunxiba, inkangeleko, ifashoni kunye nokunye. Namhlanje umdlalo esiwubonisayo apha unxulumene neNwele Cut. Nokuba uninzi lwabantu luhlala luzibuza ukucheba iinwele kunye nokwenza inkangeleko eyodwa.
Kodwa xa undwendwela abachebi bokwenyani ke basenokungakwazi ukufikelela kuyilo olunqwenelekayo. Ngenxa yokuchetywa kweenwele ezinganelisekanga, iindwendwe ezininzi ziyadana. Ukuba uyakholelwa ukuba unesakhono esihle malunga nokuchetywa kweenwele ngoko ukhuphela ngcono iBarber Chop Android.
ubungakanani 95 MB
umbhekisi I-Barber Chop
Igama lepakheji com.lajeuneandassociatesllc.barberchopdev
udidi imidlalo yokuzonwabisa - ubuhle
Ukukhuphela kunye nokufakwa kwesicelo kulula. Khuphela nje inguqulelo yamva nje ye-Apk ukusuka apha. Emva koko qalisa inkqubo yokufakela kwaye ufumane ukufikelela ngokuthe ngqo simahla kwideshibhodi ephambili. Ngaphakathi kwideshibhodi ephambili, izinto ezininzi ezahlukeneyo zongezwa.
Ezo ziquka i-Cutting Accessories, i-Anime Character, izitayile zeNwele kunye nenketho ye-Screenshot. Ukuza kuthi ga ngalo mzuzu, abalinganiswa be-anime be-16 bayafumaneka ukuba ukhethe. Kwabo ba-6 ngabasetyhini, aba-9 abaDala abaDala, aba-2 bakaSanta Claus kunye no-1 ofikisayo.
Nangona abaphuhlisi beceba ukongeza ezinye izinto ezininzi. Ukubandakanya abalinganiswa be-anime kunye nabalinganiswa abakhankanyiweyo banokufikeleleka ukuba bakhethe kwiintsuku ezizayo. Umdlalo unikeza umboniso we-3D ovumela abadlali ukuba banandiphe umlingiswa oshukumayo kuyo yonke imilinganiselo.
Olona longezo lwenza ukuba umdlalo womdlalo ube nomdla ngakumbi luphawu lwekhamera eyakhelweyo. Ngoku ukukhetha i-icon yefoto ethile kuya kuvumela abadlali ukuba bathathe ii-selfies ezahlukeneyo. Nje ukuba ugqibile ukuthatha i-selfie emva koko uyingenise ngaphakathi kwisicelo.
Ngoku nikela ukucheba okukhethekileyo kwizinwele zakho. Khumbula ukuba olu phawu lukhululekile ukufikelela kwaye lufuna iakhawunti. Oku kuthetha ukuba ukufumana ukhetho kufuna ubhaliso. Ukubukela iintengiso kuya kunceda ekuvuleni izinto zokusika zepro. Ke njengomdlalo emva koko faka iBarber Chop Khuphela ngaphakathi kwe-smartphone.
I-app yokudlala ikhululekile ukufikelela.
Ukudibanisa umdlalo kunika umboniso okhethekileyo we-3D wokusika.
Apho abathathi-nxaxheba banokugqwesa ekuchebeni iinwele.
Izinto ezahlukeneyo zokususa iinwele ziyafumaneka ukukhetha.
Uyilo oluninzi longezwa ngaphakathi kwigalari.
Ukhetho oluneenkcukacha lokusondeza luya kunceda ekususeni iinwele ngokunzulu.
I-Clip Guard iyafikeleleka ekunciphiseni ubukhulu beenwele.
Ukufikelela kwi-selfie esekelwe kwizinwele nceda ubhalise kuqala.
Ukubukela iintengiso kuya kunceda ekuvuleni izinto zokusika zepro.
Uyikhuphela njani iApk yeBarber Chop
Endaweni yokutsibela ngqo kufakelo kunye nokusetyenziswa kwesicelo. Inyathelo lokuqala kukukhuphela kwaye kuba abasebenzisi be-android banokuthembela kwiwebhusayithi yethu. Kuba apha kwiwebhusayithi yethu, sinika kuphela iifayile ze-Apk eziyinyani kunye nezangempela.
Ukuqinisekisa ukhuseleko lwabadlali kunye nobumfihlo, siqeshe iqela leengcaphephe eliquka iingcali ezahlukeneyo. Ngaphandle kokuba iqela liqinisekile ngokusebenza kakuhle kwe-Apk. Asikhe sinikezele nge-app yokudlala ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela.
Ngaba kukhuselekile ukufaka uMdlalo
Usetyenziso lwemidlalo esilunikezayo apha luqobo kwaye luxhaswa nguDlalo loGcino. Sele siwufakile umdlalo kwii-smartphones ezahlukeneyo ze-android kwaye asifumananga ngxaki inkulu. Ke ngoko abadlali banokonwabela umdlalo ngaphandle kokukhathazeka.
Ii-apps ezahlukeneyo zokudlala ze-Android zipapashwa apha kwiwebhusayithi yethu. Ezi zilungile ekudlaleni kwaye zibonelela ngemidlalo ye-intanethi kunye nemodi engaxhunyiwe kwi-intanethi. Ukuba unomdla wokudlala loo midlalo emva koko ulandele amakhonkco. Ezo zinjalo Umhlaba wam weDolophu ye-Apk kunye noFUncedo lwe-NAF lufuna i-Apk.
Ukuba udlala izakhono zicacile malunga nokucheba iinwele. Ke eli lelona thuba lakho lihle lokugweba izakhono zokusika ukufaka iBarber Chop Apk. Yiyiphi efikelelekayo ukukhuphela ukusuka apha ngokucofa okukodwa simahla.
iindidi ubuhle, imidlalo yokuzonwabisa tags Umdlalo we-3D, Barber Chop Android, I-Barber Chop Apk, Barber Chop Khuphela, Umdlalo weBarber Chop Post yokukhangela